Shan Askari oo Masaari ah oo lagu dilay weerar ka dhacay dalkaasi | Baydhabo Online
Shan Askari oo Masaari ah oo lagu dilay weerar ka dhacay dalkaasi
Waxaa la dilay Shan Askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka wadanka Masar kuwaas oo kooxo hubeysan ay rasaaseeyeen, waxayna ku sugnaayeen ciidamadaan Gobolka Sinai sida ay sheegayaan ilo dhanka ammanka iyo caafimaadka ah.
Ilo wareedyo ku sugan waqooyiga magaalada Sinai ayaa waxa ay sheegayaan in kooxo hubaysan ay istaajiyeen baabuur dad shacab ah ay saarnaayeen baabuurka ayaa waxaa la saarnaa shan ka tirsan ciidamada ammaanka Masar waxayna ku amreen inay ka soo dagaan baabuurka ,ka dibna waa ay dileen dhamaantood.
Kooxihii weerarka geystay goobta waa ay iskaga baxsadeen ciidamada la dilay ayaa waxay ahaayeen kuwo la soo fasaxay waxayna ku sii jiideen si ay fasaxooda usoo qaataan.
Meydadka shanta askari ee dilka loo geystay ayaa waxaa loo qaaday Isbitaal ku yaallo xaafadda Suways ee dalka Masar.
Dhacdadaan wali cidana masheegay mas’uuliyaddeeda kooxo hubaysan oo raacsan ururka Daacish oo ku sugan Masar ayaa waxay ka fuliyaan weeraro iyo qaraxyo mararka qaar taasoo keenta dhimashada tobaneeyo ka tirsan ciidamada ammanka wadanka Masar.